PCLinuxOS 2012.02 KDE wepụtara | Site na Linux
Wepuputara PCLinuxOS 2012.02 KDE
obi ike | | Nkesa
A tọhapụrụ nseta ihuenyo ọhụrụ nke PCLinuxOS na nso nso a.
Maka ndị gị na amaghị, PCLinuxOS bụ distro gbadoro ụkwụ Mandriva, ma n’oge a ọ bụ disto nwere agwa ntọhapụ na-agagharị, nke pụtara na ozugbo awụnyere ya adịghị mkpa iji wụnye nsụgharị ọhụrụ dịka a na-emelite ya oge niile.
Eziokwu ọzọ bụ na, n'ụzọ dị ịtụnanya, ọ na-eji ya eme ihe Nke dabara adaba dị ka njikwa nchịkọta kama iji njikwa njikwa nke gị .rpm.
Anyị nwere nsụgharị abụọ, nke kwesiri na obere, nke na-ewe obere na diski.
Enwere ike ibudata distro na ebe a
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Nkesa » Wepuputara PCLinuxOS 2012.02 KDE
Aghọtaghị m, ọ bụrụ na PC Linux OS dabeere na mandriva, kedu ka ị ga - esi jiri njikwa njikwa ngwa ngwa ma ọ bụrụ na Mandriva bụ Urpmi ???
Enwere ike ịmegharị njikwa ahụ, nke a dị ka Frugalware, ọ dabere na Slackware ma jiri Pacman
I nwekwara ike iji APT na Fedora.
Ahụrụ m nkesa a n'anya, n'ozuzu m achọghị KDE, mana na distro a ọ dị iche.
M gaara etinye ya na laptọọpụ m ma ọ bụrụ na m hụrụ ya 1 awa gara aga tupu ịwụnye Mandriva «Kachasị mma nkesa e nwere» http://blog.mandriva.com/en/2012/01/30/not-this-time/ Hahaha
Otu na okwu izizi nke njikọ a dị m ezigbo mma, ọ bụ ya mere m ji gwa ya ihe m kwuru
Ọfọn, m wepụrụ Mandriva na họọrọ Chakra. Anwaleghị m PCLinuxOS n'ihi na ọ masịrị m ikesa x64.
Ọfọn, Chakra na-amasịkwa m karịa Mandriva, Mandriva bụ otu Mac O $ X
Nah, ikwesighi iga oke xD. Mandriva bụ (ma ọ bụ, tupu ewepụ ọtụtụ ngwaọrụ, ana m ekwu maka 2010.1) emechara nke ọma. N'oge ya, ọ bụ naanị ya nyeere m aka na laptọọpụ na-enweghị atụ, n'agbanyeghị na m na-eji Gnome maka oge ndị ahụ.
Ka anyị hụ mgbe m tinyere uwe aka Chakra!
Daybọchị m jiri KDE mee ihe m ga-anwale ya 😀
Ka anyị hụ, amaara m na ọ nweghị ihe jikọrọ ya na ***, mana achọrọ m enyemaka ma amaghị m ebe m nwere ike ịga:
My nsogbu bụ ndị na-esonụ: nke niile distros na m arụnyere, ọ dịghị onye m nwere ike dịkwuo mkpebi nke 800 × 600 ma ọ bụ 1024 × 768, M nwere Intel HD 2000, ike, na Intel Pentium Dual Core G620 processor (Sandy) Akwa) na 2,6 Ghz.
Na Windows 7 mgbe ị wụnye ọkwọ ụgbọala eserese m setịpụrụ mkpebi ahụ n'ụzọ ziri ezi, na-enweghị nsogbu ọ bụla.
Na GNU / Linux Intel anaghị eji ndị ọkwọ ụgbọ ala, n'ihi na enwere m ọtụtụ ihe ha nwetara na Intel ma nwee nsogbu ọ bụla….
*** (M tinyere ya na akụkọ a n'ihi na m gụrụ na Phoronix na nke ahụ nke kernel nke na-eji PCLinux na ntinye nke VESA 7.11 enwere ike idozi ya).
Nwere ike ịga ebe a: http://foro.desdelinux.net/
Aga m anwa ya iji hụ ka o si arụ ọrụ.
Amaghị m na ọ na-agagharị. Obere ihe maka PCLinux, na-enwu gbaa.
Amaghị m na ọ bụ ma 😀
otu n'ime ọgba aghara kachasị amasị m na onye kpatara m ịgbanwe na KDE.
M ka na-echeta na enweghị agụụ mgbe m na-eji Mandrake 10, otu oge si aga na ihe gbanwere.
Ndị mmadụ m na-ekele gị maka blog, n'oge na-adịbeghị anya, m bịara ebe a site na "Googled" ọtụtụ na-achọ Arch hehe, mgbe m hapụrụ laptọọpụ m VAIO laptọọpụ (sony + na o yiri ka ha na-akpa nkata iji gbochie ndụ penguuin) maka onye nwere ihe osise Intel. ga-alaghachi na Linux ụwa.
Desktọpụ Linux kacha mma: February 2012
PCLinuxOS KDE 2012.02 dị!